China SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (nasal) ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Liming Bio
ထုတ်ကုန်သည် နယူးဇီလန်တွင် သီးသန့်အေးဂျင့်တစ်ခုရှိသည်။ဝယ်ယူလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းနံပါတ် : 0755564763
မိုဘိုင်းနံပါတ် : 0492 009 534
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette သည် လူ့ရှေ့နှာခေါင်းဆွပ်နမူနာတွင် SARS- CoV-2 nucleocapsid antigen ကိုရှာဖွေရန် immunochromatography နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။ဤဝှေးစေ့သည် တစ်ကြိမ်တည်းသာ အသုံးပြုပြီး ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ရောဂါလက္ခဏာစပြီး5ရက်အတွင်း ဤစစ်ဆေးမှုကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။၎င်းကို ဆေးခန်းစွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်မှုဖြင့် ထောက်ခံထားသည်။
Novel coronaviruses သည် totiie p genus ဖြစ်သည်။COVID-19 သည် ပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။လူတွေဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိတွင်၊ ဝတ္ထု cxjronavinis မှကူးစက်သောလူနာများသည်ကူးစက်မှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ရောဂါလက္ခဏာမပြသော ရောဂါပိုးရှိသူများသည်လည်း ကူးစက်နိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။လက်ရှိကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု 1 ကိုအခြေခံ၍ ပေါက်ဖွားသည့်ကာလသည် 1 ရက်မှ 14 ရက်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ3ရက်မှ7ရက်ဖြစ်သည်။အဓိက လက္ခဏာများမှာ ဖျားခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ myalgia နှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ကို အချို့သောကိစ္စများတွင် တွေ့ရပါသည်။
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Test သည် immunochromatographic စမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။SARS-CoV-2 နှင့် သက်ဆိုင်သော စေးစပ်ပေါင်းစပ်ထားသော ပဋိပစ္စည်း (Latex-Ab) ကို နိုက်ထရိုဆဲလ်လူလိုစမြှေးအမြှေးပါး၏အဆုံးတွင် ခြောက်သွေ့သော-မလှုပ်မယှက်ဖြစ်စေသည်။SARS-CoV-2 ပဋိပစ္စည်းများသည် Test Zone (T) တွင်နှောင်ကြိုးနှင့် Biotin-BSA သည် Control Zone (C) တွင်နှောင်ကြိုးဖြစ်သည်။နမူနာကို ပေါင်းထည့်သောအခါ၊ ၎င်းသည် စေးကိုရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးသော သွေးကြောမျှင်များပျံ့နှံ့ခြင်းဖြင့် ရွေ့ပြောင်းသည်။နမူနာတွင်ပါရှိပါက SARS-CoV-2 အန်တီဂျန်များသည် အမှုန်များဖွဲ့စည်းသည့် ပေါင်းစပ်ထားသော ပဋိပစ္စည်းများနှင့် ချည်နှောင်မည်ဖြစ်သည်။ဤအမှုန်အမွှားများသည် SARS-CoV-2 ပဋိပစ္စည်းများမှ ဖမ်းယူရရှိသည့် စမ်းသပ်ဇုန် (T) မတိုင်မီအထိ ဤအမှုန်အမွှားများ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါမည်။နမူနာတွင် SARS-CoV-2 antigens များမရှိပါက၊ Test Zone (T) တွင် အနီရောင်မျဉ်းကို မတွေ့ရ။စမ်းသပ်မှု၏တရားဝင်မှုကိုညွှန်ပြသော Biotin-BSA ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ထိန်းချုပ်ရေးဇုန်(C) တွင် ဖမ်းမိသည်အထိ စထရက်ဗီဒင်ပေါင်းစပ်မှုသည် တစ်ယောက်တည်း ဆက်လက်ရွေ့လျားနေမည်ဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်မှု 1 ခု/သေတ္တာ;5စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ:
အလုံပိတ်ထားသော သတ္တုပြားအိတ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာများ စက်တစ်ခုစီတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင် ရောင်စုံပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများပါသည့် အကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။
Dilution Buffer ပုလင်းများ 0.1 M Phosphate buffered saline (PBS) နှင့် 0.02% sodium azide ။
ထုတ်ယူရေးပြွန်များ နမူနာပြင်ဆင်မှုများအတွက် အသုံးပြု.
swab အထုပ်များ နမူနာစုဆောင်းခြင်းအတွက်။
အလုပ်ရုံ ကြားခံပုလင်းများနှင့် ပြွန်များ ကိုင်ဆောင်ရန် နေရာ။
20 တစ်ဦးချင်းစီ ထုပ်ပိုးထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာများ
စက်တစ်ခုစီတွင် သက်ဆိုင်ရာ reqions တွင် ကြိုတင်ဖြန့်ကျက်ထားသော ရောင်စုံပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများပါသော အကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။
ထုတ်ယူခြင်း Buffer ပုလင်း ၂ ခု
0.1 M ဖော့စဖိတ်ဆားရည် (P8S) နှင့် 0.02% ဆိုဒီယမ် အဇိုက်။
ကြားခံပုလင်းများနှင့် ပြွန်များ ကိုင်ဆောင်ရန် နေရာ။
1 Package ထည့်သွင်းပါ။
ပစ္စည်းများ လိုအပ်သော်လည်း မပေးထားပါ။
လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ
- ဤကိရိယာသည် VITRO ရောဂါရှာဖွေရေးအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ ညွှန်ကြားချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။
ဤထုတ်ကုန်တွင် မည်သည့်လူ့အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများမှ မပါဝင်ပါ။
- သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နောက်ပိုင်း kit content တွေကို အသုံးမပြုပါနဲ့။
စမ်းသပ်ကိရိယာရှိ အလုံပိတ်အိတ်များကို အိတ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သိုလှောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် 2-30 C အကြား သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
အရှေ့ဘက်နှာခေါင်းသုတ်ဆေးနမူနာကို တစ်ဦးချင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော swab ဖြင့် စုဆောင်းနိုင်သည်။
အသက် 18 နှစ်အောက်ကလေးများကို ၎င်းတို့၏ aduK ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ များသည် အရှေ့ဘက်နှာခေါင်းပွတ်တံကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ကျေးဇူးပြု၍ ကလေးများ၏ နမူနာစုဆောင်းခြင်းအတွက် သင့်ဒေသဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
လူနာ၏နှာခေါင်းပေါက်တစ်ခုထဲသို့ swab တစ်ခုထည့်ပါ။နှာခေါင်းအစွန်းမှ 2.5 စင်တီမီတာ (1 လက်မ) အကွာအဝေးအထိ swab ထိပ်ကို ထည့်ရပါမည်။ချွဲနှင့် ဆဲလ်များ စုဆောင်းကြောင်း သေချာစေရန် နှာခေါင်းအတွင်းရှိ mucosa တစ်လျှောက် ၅ ကြိမ် လှိမ့်ပေးပါ။
• တူညီသော swab ကိုသုံးပါ၊ လုံလောက်သောနမူနာကို နှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုလုံးမှ စုဆောင်းကြောင်းသေချာစေရန် အခြားနှာခေါင်းပေါက်အတွက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်လုပ်ပါ။
နမူနာများဖြစ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ဆောင်ရွက်ပြီးစုဆောင်းပြီးနောက် အမြန်ဆုံးနမူနာများကို မိခင်အပူချိန် (15°C မှ 30”C) အတွင်း သို့မဟုတ် rsfrrigeratod (2°C မှ 8” အတွင်း 24 နာရီအထိ ကွန်တိန်နာတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။eဂ) လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ။
စမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ နမူနာများ၊ ကြားခံများနှင့်/သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးမပြုမီ အခန်းအပူချိန် (15-30°C) သို့ ယူဆောင်လာပါ။
♦စုဆောင်းထားသောနမူနာထုတ်ယူသည့်ပြွန်ကို အလုပ်ရုံ၏သတ်မှတ်ဧရိယာတွင် Plac®။
♦Dilution Buffer အားလုံးကို ext radion tube ထဲသို့ ညှစ်ပါ။
♦နမူနာ swab ကို ပြွန်ထဲသို့ထည့်ပါ။ဆပ်ပြာကို ပြွန်တစ်ဖက်ကို အနည်းဆုံး 15 ကြိမ် (ရေမြုပ်နေချိန်) လှည့်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းချက်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရောမွှေပါ။နမူနာကို ဖြေရှင်းချက်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရောစပ်သောအခါ အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ရရှိသည်။
♦နောက်တစ်ဆင့်မတက်မီ တစ်မိနစ်ခန့် စုပ်ခွက်ကို Extraction Buffer တွင် စိမ်ထားပါ။
♦ဆပ်ပြာကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုတ်ယူသည့်ပြွန်၏ ဘေးဘက်ခြမ်းကို ညှစ်ခြင်းဖြင့် swab မှ အရည်များကို တတ်နိုင်သမျှ ညှစ်ထုတ်ပါ။လုံလောက်သော သွေးကြောမျှင်များ ရွှေ့ပြောင်းမှုဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံးနမူနာ 1/2ofttie ကြားခံဖြေရှင်းချက်သည် ပြွန်ထဲတွင် ရှိနေရပါမည်။ဦးထုပ်ကို ထုတ်ယူထားသော ပြွန်ပေါ်သို့ တင်ပါ။
♦ဆပ်ပြာကို သင့်လျော်သော ဇီဝအန္တရာယ်ရှိသော အမှိုက်ပုံးတွင် စွန့်ပစ်ပါ။
♦ထုတ်ယူထားသောနမူနာများသည် စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကို မထိခိုက်စေဘဲ မိနစ် 30 အတွင်း အခန်းအပူချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
♦စမ်းသပ်ကိရိယာကို ၎င်း၏အလုံပိတ်အိတ်ထဲမှ ဖယ်ရှားပြီး အဆင့်အတန်းရှိသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထားလိုက်ပါ။စက်ပစ္စည်းကို လူနာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု အထောက်အထားဖြင့် အညွှန်းတပ်ပါ။အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိရန်၊ စစ်ဆေးမှုအား မိနစ် 30 အတွင်း လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
♦Extraction Tube မှထုတ်ယူထားသောနမူနာ3drops (100 pL ခန့်) ကို စမ်းသပ်ကိရိယာရှိ အဝိုင်းနမူနာထဲသို့ ပေါင်းထည့်ပါ။
နမူနာရေတွင်း (S) တွင် လေပူဖောင်းများကို ဖမ်းမိခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး လေ့လာရေးပြတင်းပေါက်တွင် မည်သည့်အဖြေကိုမျှ မချပါနှင့်။စမ်းသပ်မှုစတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အမျှ အမြှေးပါးတစ်လျှောက်တွင် အရောင်ပြောင်းသွားသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။
♦ရောင်စုံတီးဝိုင်း(များ) ပေါ်လာစေရန် ကြွက်နို့။ရလဒ်ကို 15 မိနစ်အတွင်းအမြင်ဖြင့်ဖတ်ရပါမည်။မိနစ် 30 ပြီးနောက်ရလဒ်ကိုနားမလည်ပါ။
•ဆပ်ပြာနှင့် အသုံးပြုထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာပါရှိသော စမ်းသပ်ပြွန်ကို ပူးတွဲပါရှိသော ဇီဝအန္တရာယ်အိတ်ထဲသို့ ထည့်ပြီး တံဆိပ်ခတ်ပြီးနောက် သင့်လျော်သော ဇီဝအန္တရာယ် အမှိုက်ပုံးထဲတွင် စွန့်ပစ်ပါ။ထို့နောက် ကျန်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ပါ။
•ရေဆေးပါ။သင့်လက် သို့မဟုတ် လက်သန့်ဆေးရည်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။
သင့်လျော်သော ဇီဝအန္တရာယ်ရှိသော စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံးတွင် အသုံးပြုထားသော ထုတ်ယူပိုက်များနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများကို စွန့်ပစ်ပါ။
1- Nasal မှ SARS-CoV-2 antigens များ၏ အရည်အသွေးကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
2. ဤစမ်းသပ်မှုသည် ရှင်သန်နိုင်သော (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ) နှင့် မဖြစ်နိုင်သော SARS-CoV-2 နှစ်ခုလုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။စမ်းသပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် နမူနာရှိ ဗိုင်းရပ်စ် (antigen) ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်ပြီး တူညီသောနမူနာတွင်ပါရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်ယဉ်ကျေးမှုရလဒ်များနှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိနိုင် သို့မဟုတ် မဆက်စပ်နိုင်ပါ။
3.နမူနာတစ်ခုရှိ အန်တီဂျင်အဆင့်သည် စမ်းသပ်မှု၏ ကန့်သတ်ချက်အောက်ရှိ သို့မဟုတ် နမူနာကို စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာ သယ်ဆောင်သွားပါက အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
4. စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် စမ်းသပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။
5. စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် လူနာအား အကဲဖြတ်သည့် ဆေးခန်းမှ ရရှိနိုင်သော အခြားအချက်အလက်များ၊ ဆေးခန်းမှတ်တမ်း၊ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်နေရပါမည်။
6. အပြုသဘောဆောင်သော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် အခြားရောဂါပိုးများနှင့် ပူးတွဲကူးစက်မှုကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
7. Negative စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် အခြားသော SARS မဟုတ်သော ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများတွင် ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
8. ရောဂါလက္ခဏာစတင်ခြင်း ခုနစ်ရက်ကျော်လွန်သော လူနာများမှ အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များကို သံသယဖြစ်ဖွယ်အဖြစ် ကုသသင့်ပြီး လိုအပ်ပါက ရောဂါပိုးထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင် ဆေးခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ FDA မှ ခွင့်ပြုထားသော မော်လီကျူးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဖြင့် အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
9.Specimen တည်ငြိမ်မှု အကြံပြုချက်များသည် တုပ်ကွေးစမ်းသပ်ခြင်းမှ တည်ငြိမ်မှုဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီး စွမ်းဆောင်ရည်သည် SARS-CoV-2 နှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။အသုံးပြုသူများသည် နမူနာများကို စုဆောင်းပြီးနောက် ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် စမ်းသပ်သင့်သည်။
10.COVID-19 ရောဂါရှာဖွေရာတွင် RT-PCR စစ်ဆေးမှုအတွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည့်အဆင့်တွင် နမူနာအရည်အသွေး သို့မဟုတ် ရောဂါအချိန်အမှတ်ညံ့ခြင်းကြောင့် 50%-80% သာရှိပါသည်၊ စသည်ဖြင့် SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းမှာ သီအိုရီအရဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နည်းစနစ်ကြောင့် နိမ့်ကျသည်။
11. ဗိုင်းရပ်အလုံအလောက်ရရန်အတွက်၊ မတူညီသောနေရာများကိုစုဆောင်းရန်နှင့် နမူနာပြွန်တစ်ခုတည်းရှိ swab အားလုံးကိုထုတ်ယူရန် swab နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော swab ကိုအသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
12. အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးများသည် ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းများပေါ်တွင် အလွန်မူတည်ပါသည်။
13. အပြုသဘောဆောင်သော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် SARS-CoV-2 ကြောင့်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါပျံ့နှံ့မှုနည်းသောအခါတွင် I no SARS- CoV-2 လုပ်ဆောင်ချက် အနည်းငယ်သာရှိသည့်ကာလအတွင်း အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များသည် မှားယွင်းသောရလဒ်များကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ မြင့်မားသော။
14.Monoclonal antibodies များသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနည်းသော SARS-CoV-2 တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်များကို ပစ်မှတ် epitope ဒေသရှိ အသေးစားအမိုင်နိုအက်ဆစ်ပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့နေရသော ဗိုင်းရပ်စ်များကို ထောက်လှမ်းရန် သို့မဟုတ် သိရှိရန် ပျက်ကွက်နိုင်သည်။
15. ဤစမ်းသပ်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများနှင့် လက္ခဏာများမရှိသော လူနာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုရသေးဘဲ ရောဂါလက္ခဏာမပြသော ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
16.နမူနာတစ်ခုရှိ အန်တီဂျင်ပမာဏသည် ဖျားနာမှုကြာချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။နာမကျန်းမှု5ရက်ပြီးတိုင်းစုဆောင်းထားသောနမူနာများသည် RT-PCR စစ်ဆေးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။
17. ရောဂါလက္ခဏာများစတင်ခြင်း၏ပထမငါးရက်အကြာတွင်စမ်းသပ်မှု၏အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် RT-PCR စစ်ဆေးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်။
18. ၎င်းသည် COVID-19 ၏ရောဂါရှာဖွေနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ပဋိပစ္စည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် StrongStep® SARS-CoV-2 IgM/IgG အမြန်စမ်းသပ်မှု (caW 502090) ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
19. ဤစမ်းသပ်မှုတွင် Virus Transportation medla(VTM) နမူနာကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားခြင်း မရှိဘဲ၊ ဝယ်ယူသူများသည် ဤနမူနာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုပါက၊ ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့ကို အတည်ပြုသင့်သည်။
20.The StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ကို kit တွင် ပေးထားသည့် swabs များဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။အစားထိုး swabs များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် မှားယွင်းသောရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
21.COVID-19 ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် မကြာခဏ စမ်းသပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
22. အောက်ဖော်ပြပါမျိုးကွဲများသို့ ရောနှောထားသော တောရိုင်းအမျိုးအစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အာရုံခံနိုင်စွမ်းကျဆင်းသွားခြင်းမရှိပါ - VOC1 Kent၊ UK၊ B.1.1.7 နှင့် VOC2 တောင်အာဖရိက၊ B.1.351။
23 ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာ၌ ထားပါ။
24. အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များက ယူထားသောနမူနာတွင် ဗိုင်းရပ်စ် antigens များတွေ့ရှိထားကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်တိုင်သီးသန့်ခွဲထားပြီး သင့်မိသားစုဆရာဝန်ထံ အမြန်အကြောင်းကြားပါ။
အမှတ် 12 Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 PR China.
ဖုန်း- +86(25) 85288506
Antigen Rapid Test လက်ကမ်းစာစောင်များ (20200713)
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ဂျာမန်လက်စွဲ
တံတွေး sars-cov-2 Antigen လက်တွေ့လေ့လာမှု (Swab)
COVID-19 Antigen အစုံ
ယခင်- Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit
နောက်တစ်ခု: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test အတွက် Dual Biosafety System Device
Cryptococcal Antigen စမ်းသပ်မှု, ပဋိပစ္စည်းစမ်းသပ်ကိရိယာ, Covid-19 စစ်ဆေးခြင်းအတွက် Coronavirus, Novel Coronavirus 2019 Ncov, လူ့ Coronavirus Igm/Igg Antibody စမ်းသပ်မှု, Covid-19 အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ,